GI SPORTZ kere ndị egwuregwu mbụ nke ndị na-eme egwuregwu na-arụ ọrụ n'ime osisi ndị na-agagharị n'etiti osisi, na-asọba n'àkwà mmiri, na-agafe n'ogige osisi. Site na mmemme ndị e kere iji mee ka ndị egwuregwu nwee ahụmahụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịme ka ndị egwuregwu egwuregwu anyị hụrụ n'anya na usoro ihe omume zuru ụwa ọnụ na-eduzi na onye ọkpụkpọ egwuregwu ntụrụndụ nke na-achọ ịbụ akụkụ nke ndị na-eme egwuregwu paintball.
Uru ndị Player
GI SPORTZ Ndị òtù
Ndenye ịkwụ ụgwọ nke $ 25 site na ndebanye ndebanye aha.
Nata onye na-arụ ọrụ na Velcro Hat, Tech T-Shirt, Patch, card ID, na lanyard.
Uru maka ndị si na Brigade Mgbakwunye Ubi
$ 10 ka ego ego 20 ga-eme na ihe omume ndị isi.
A ga-edepụta ihe ndị a dịka ihe ịrịba ama na-eme.
Ọ bụghị ihe ọ bụla anyị kwalite ga-enwe ego.
E nwere ihe omume brigade blọọgụ ebe ndị òtù na-ezukọ na-egwu.
E nwere ihe ndị na-eme ka a na-ahụ maka ihe ndị a ga-eme ebe a ga-enwe ihe mmechi ahụ kpọmkwem maka ndị òtù 100 mbụ. Enwere isi ihe eji eme ihe na ihe eji eme ihe, ma ma ọ bụ ego a na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ ego na GI Booth ma ọ bụ mgbe ụfọdụ. A ga-edekọ nkọwa na ibe Facebook na ihe omume ọ bụla.
Ihe Nlekọta Ihe Omume
Na-anakọta patches dabere na egwuregwu ị na-egwu.
Na-anakọta Global Patch maka ịga otu ihe omume na 3 mba dị iche iche.
Na-anakọta Patch Trifecta maka ịga 3.
Otu esi emeghe ihe nrite
Ide maka nweta Patch
Na-abịa na Ihe
Ihe ndị na-esonụ bụ ihe nkwụsị.
Ihe ngwugwu ihe omume maka ndị mbụ 100-200 so na-elele na ihe omume ahụ.
CPX Na-atụgharị Ụgha 3 - 2 / 9-11 / 2018
Ogwu Ops Ops na Cousins - 25-Mar / 2018
Ọkpụkpụ CPX na Ash - 3 / 23-25 / 2018
Ihe osise Paintball nke Texas - 3 / 24-25 / 2018
51 Supergame - 5 / 4-6 / 2018
Ugbo Mmiri Vipers na Avid Extreme Sports Park - 5 / 4-6 / 2018
Sherwood Omuma - 5 / 4-6 / 2018
CPX Ndị Na-ahụ Maka Ngwụrụgwu 11 na Ndị Nzọpụta Ọhụụ - 5 / 18-20 / 2018
Egwuregwu Egwuregwu Cousins - 6 / 2-3 / 2018
Agha Ụwa 7 PB Na-alụ Agha Ụwa - 7 / 8 / 2018
Gbaa ION ume - 7 / 15-17 / 2018
Osimiri nke Normandy White River PB - 7 / 20-22 / 2018
Lone Wolf Red ọcha acha anụnụ anụnụ - 7 / 15 / 2018
CJ Egwuregwu - 8 / 25 / 2018
Ngwongwo 24hr KC Crusaders - 8 / 25-26 / 2018
Ngwongwo CPX Hawaiin - 9 / 1-2 / 2018
Ihe Ịma Aka nke Ụwa na-anwụ anwụ - 9 / 21-23 / 2018
Nnukwu Egwuregwu Egwuregwu nke Mba - 9 / 29-30 / 2018
Akwụkwọ Akụkọ Na-adịghị agwụ agwụ CPX 2 - 10 / 5-7 / 2018
Vipers Nkume na Evid Extreme Sports Park - 10 / 6-7 / 2018
Egwuregwu Egwuregwu Na-egbuke egbuke - 10 / 7 / 2018
Paintball Iwu Pandora egwuregwu - 10 / 13-14 / 2018
Okpukpo Okoo Wolf Wolf - 10 / 14 / 2018
Clowns vs Zombies 8 PB Ọgbawa - 10 / 14 / 2018
Egwuregwu Viper egwuregwu TXR - 11 / 10-11 / 2018
Ogwurugwu Ohu Ogwu Ogwu Ogwugwugwu XXII - 11 / 18 / 2018
Ụzọ Isi Nzuzo - 11/30/2018-12/2/2018
Commando Tippmann Nsogbu - 6 / 12 / 2018
Nsogbu Mirabel Tippmann - 8 / 9-11 / 2018
Young Guns pb Tippmann Nsogbu - 9 / 2 / 2018
Flagraiders OPL / Big egwuregwu - 9 / 29 / 2018
Agha maka Hoth - 2 / 4 / 2018
Ops - 6 / 2 / 2018
Ndagwurugwu Hunter Valley Paintball - 9 / 29 / 2018
Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na-agbakwụnye ihe ndị ga-agụnye ego na ntinye.
The BPR bụ usoro ụgwọ ọrụ maka ndị òtù Brigade, ndị na-akwado egwuregwu mmeri (họrọ ihe omume), na onye nchịkwa Paintball.
(2 Grand Prize winners) Bụrụ GI SPORTZ PRO.
Ịga njem ụgbọelu, ụlọ nkwari akụ, nri, ntinye, ikuku, ihe osise maka gị na enyi gị, n'otu n'ime egwuregwu anyị kachasị mkpa. Onye mmeri na-enwetakwa akpa akpa ya na ihe eji eme ya, tinyere uwe ogologo, akwa, ajị, tank, marker na loader.
Akpa akpa nke nwere ngwongwo brigade, okpu, uwe elu, akwa, akwa, jersey, akpa, tank, loader, na marker.
(Mmeri Ngozi 5)
Gaa Gggle SPORTZ nke nhọrọ gị.
Get GI SPORTZ t-shirt na okpu.
Brigade Nkwado ụdị
© 2018 GI Sportz. Ikike niile echekwabara.